पाँच वर्षे शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक, देशभक्ति प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पाँच वर्षे शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक, देशभक्ति प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख
काठमाडौं। सरकारले पाँच वर्षे शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने संकल्प पूरा गर्ने भन्दै ५ वर्षे शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो। विगतको पाठ, वर्तमानको धरातल र भविष्यको अपेक्षालाई समेत सम्बोधन हुने गरी शैक्षिक मार्गचित्र तय गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको मार्गचित्रमा देशभक्तिलाई प्रवद्र्धन गर्ने शैक्षिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कामलाई सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक कानुनी, संरचनागत र संस्थागत रुपान्तरण गर्ने जनाए।
मार्गचित्रमा विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क तथा विश्वविद्यालय तहको शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रलाई आवश्यक हुने जनशक्ति निर्माण हुने गरी आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
मार्गचित्रमा सबै प्रदेशहरुमा एक आवासीय भातृभाषा विद्यालय स्थापना गर्ने योजना पनिअघि सारिएको छ। आवश्यक्ता र स्थानीय रुचि र चाहना अनुसार पाठयक्रम निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले बालबालिकाको चाहना अनुसारको पाठयक्रम निर्माणका लागि स्थानीय तहका सरकारसँग समेत परामर्श गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
मार्गचित्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी शिक्षामा प्रविधिको पहुँच पु¥याउन सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने, उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय स्वयमसेवा कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक निकाय र जनशक्तिलाई पारदर्शी र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन सुशासनमा जोड दिने जनाए। मार्ग चित्रमा अभिव्यक्त नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु ठोस कार्यान्वयनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ३ महिने कार्ययोजना बैशाख २ गते सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। मन्त्री पोखरेलले मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरु योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।